Farmaajo oo caddeeyay tanaasulka mowqifkiisa doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo caddeeyay tanaasulka mowqifkiisa doorashada
Madaxweynaha ayaa sheegay in uu tanaasulay markuu arkay in shirka lagu kala tegi rabo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay khudbad ka jeediyay xaflad casho sharaf iyo sagootin ah oo Villa Soomaaliya loogu sameeyay madaxda maamulada ee ka qeyb galay shrkii wada-tashiga doorashooyinka ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa khudbad uu goobta ka jeediyay ku sheegay sababaha ku kalifay in uu ka tanaasulay mowqifkiisa siyaasadeed ee ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, taasoo uu markii hore ku dhegannaa, lagana fuji waayay.
Wuxuu sheegay in uu go'aansaday markuu arkay in shirka qarka u saarnaa in lagu kala tago sababo la xiriiro qodobka uu Madaxweynaha ku dheganaa ee ahaa doorasho qof iyo cod ah, sidaasi awgeedna uu tanaasul u sameeyay si shirka natiijo la'aan aanu u dhamaan.
"Waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meesha u dambeysay oo ah in lakala tago, waxaa i soo baxday labo inaan kala doorto, waxay kala yihiin in dalka aan isku haayo oo aanu kala tagin iyo in aanu shisheeye na soo faragelin oo aysan isu keen soo jiidin ayaa keentay inaan qaato tanaasul, waxeena ha xumaado ha samaato aan gaarno go'aankeeda mas'uuliyadeeda qaadano, laakiin shisheeye aanu marna na soo dhex gelin" ayuu yiri Farmaajo.
Dadka siyaasadda odoroso ayaa sheegaya in madaxweynaha uu xalay rajo xumo ka muujiyay mustaqbalkiisa siyaasadeed maadaama uu cadeeyay guul daradiisa ku aadan shirkii wadatashiga arrimaha doorashooyinka.